အနိမျ့ကြိမ်နှုန်းစတစ်ကာများ, Low Frequency Soft Label, 125KHz Low Frequency Stickers, RFID 125KHz ဖျတံဆိပ်တပ်ရန်, Low frequency Self-adhesive Label, 125KHz Self-adhesive Label, from SeabreezeRFID Co., Ltd မှ.
အနိမျ့ကြိမ်နှုန်းစတစ်ကာများ, RFID 125KHz ဖျတံဆိပ်တပ်ရန်
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် 125KHz Low Frequency Stickers, 125KHz Self-adhesive Label, Low frequency Self-adhesive Label, Low Frequency Soft Label, အနိမျ့ကြိမ်နှုန်းစတစ်ကာများ, RFID 125KHz ဖျတံဆိပ်တပ်ရန်
သာမှတ်ဉာဏ် Read: 512နည်းနည်း
Read နှင့်ကြိမ်ရေးရန်: 100,000 ကြိမ်
ပစ္စည်း: စက္ကူ / PVC / PET / PETG / ကို ABS, သို့မဟုတ် 3M စတစ်ကာများကိုသတ်မှတ်
antenna ပစ္စည်း: ကြေးနီ
label အရွယ်အစား: 85.554mm / 18mm / 25mm / 28mm ×သို့မဟုတ်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်
ထူသောတံဆိပ်ကပ်: 0.5မီလီမီတာ / 1mm သို့မဟုတ်အထူကိုသတ်မှတ်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20ကို C ~ + 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
Low Frequency Stickers is the 125KHz tags made with EM4102 chip, suitable for use in low frequency soft tag environments such as access control identification, books, valuable asset management, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, logistics tracking, biometrics, article identification, စက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်, စသည်တို့ကို.
The Low-frequency Self-adhesive Label is beautiful in appearance, အသုံးပြုရလွယ်ကူ, and widely used. It is suitable for use in various fields. It is made of paper, film or special materials, with adhesive on the back andacomposite of silicon-coated protective paper as the backing paper. ပစ္စည်း, and after printing, die-cutting and other processing intoafinished product label. The application requires only peeling from the bottom paper, and can be applied to the surface of various substrates withasingle press, and labeling machines can also be used to automatically label in the production line.
Paper surface color printing pattern, လိုဂို, Two-ရှုထောင်ကုဒ်, serial number and so on.
I am interested in your product Low Frequency Stickers, RFID 125KHz ဖျတံဆိပ်တပ်ရန်
prev: RFID လက်ဝတ်ရတနာစတစ်ကာများတံဆိပ်တပ်ရန်, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF လက်ဝတ်ရတနာစတစ်ကာများတံဆိပ်တပ်ရန်
နောက်တစ်ခု: RFID စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုတံဆိပ်တပ်ရန်
RFID တစ်ခါသုံးတပတ်ရစ်လက်ဝတ်ရတနာတံဆိပ်တပ်ရန်, ကြေးနီကွိုင်နှင့်အတူ RFID လက်ဝတ်ရတနာတံဆိပ်တပ်ရန်
Chip ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင်နှင့်အတူလှိုင်းနှုန်းသည် UHF စတစ်ကာ, Chip ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင်နှင့်အတူလှိုင်းနှုန်းသည် UHF တံဆိပ်တပ်ရန်
custom ကိုယ်တော်တိုင် 413 DNA ကို / 424 DNA ကိုစတစ်ကာ, ဒေတာကိုတမ်ပါ Resistance, မြင့်မားသောလုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေး